umshuwalense wenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana - Gary Bailey
Tag: umshuwalense wenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana
Ngomshwalense wemoto yomshuwalense, ngokuvamile kunezinhlobo ezimbili zezicelo ongayithola futhi ziyimpahla kanye nemfanelo. Ngokuvamile, Izingcaphuno Zemishuwalense Yemoto umthwalo wemfanelo uzokufihla umnikazi wemoto ngazo zonke izizathu ezinjengezinhloso zokulimaza noma ukunganaki. Umshuwalense womhlaba, ngakolunye uhlangothi uhlanganisa noma yimuphi umonakalo owenzelwa emotweni yakho noma umonakalo owenziwe kwenye imoto.
Ngakolunye uhlangothi, ukukhishwa imali kungukuthi uzodinga ukuzixazulula ngaphambi kokuba inkampani ithathe isimangalo. Esimweni esinjalo, Imoto Yomshuwalense Wemoto Esho I-south Africa kunesidakamizwa kuzo zonke izenzakalo kanye nayo yonke inqubomgomo. Uma i-deductible iphakanyiswa, ama-premium ahla.